Kalon’ny fahiny : mila fanampiana ny bà gasy | NewsMada
Kalon’ny fahiny : mila fanampiana ny bà gasy
Manao izay tratry ny heriny ny fikambanana Sehatra Bà Gasy ho fampahafantarana sy fampiroboroboana ity mozika anisan’ny mampiavaka antsika ity. Na izany aza, tsikaritra ho tsy ampy izany fa mila fanohanana avy amin’ny hafa : ny minisitera mpiahy sy ny sehatra tsy miankina.
Nanolotra fampisehoana « feno » ireo tarika nanafana ny « Bà gasy an-tsehatra », omaly tetsy amin’ny Tranompokonolona Analakely. Feno, satria matihanina ny natolotra ny mpijery (hira, fomba fisehoana an-tsehatra, haingo, fanamafisam-peo, sns). Ny indro kely anefa, maro ny seza tsy nisy mpipetraka.
Isam-bolana, mizara traikefa amin’ireo rehetra mankafy mihira bà gasy ny Sehatra Bà gasy. Tsy vitsy ireo mamaly ny antso amin’izany ary ao anatin’izany ny tanora. Ankoatra izany, miaina sy miasa ny fikambanana eo amin’ny fampahafantarana tsy an-kiato ity mozika ity. Midika izany rehetra izany fa manao ezaka hatrany ireo mpikambana.
Ny olana ? Azo lazaina ho tsy ampy ny serasera, indrindra mialoha ny fampisehoana, toy ny notanterahina omaly. Nisy ihany ny peta-drindrina, saingy vitsy, tsy toy ireny amin’ny fampisehoan’ny artista lehibe ireny, sady tsy mahasehaka sokajin’olona samihafa izany. Marihina fa anisan’ny andaniam-bola be indrindra, rehefa manao seho toy izao, ny lafiny dokam-barotra. Raha ny bà gasy no resahina, tsy ho vitan’ny fikambanana irery izany. Eo no ilana ny fanohanan’ny minisitera mpiahy sy izay rehetra resy lahatra ny amin’ny maha zava-dehibe ity seha-javakanto iray ity.
Fa na vitsivitsy aza ireo tonga nijery ny « Bà gasy an-tsehatra », omaly, tsapa ho tena nankafy izy ireo ary samy niezaka nanafana ny sehatra ireo nifandimby niakatra teny. Nisantatra izany, tamin’ny « Antananarivo » (nosoratan’i Naka Rabemananjara) sy ny « Akanga tsy saraky ny ala » ny tarika Angola Itokiana. Nandimby azy, avy eo, i Lizah Raseta ary narahin’ny Aro kalon’ny fahiny.